G7 ဟာ ဧပြီလအကုန်မှာထွက်ရှိလာမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ LG! – AsiaApps
G7 ဟာ ဧပြီလအကုန်မှာထွက်ရှိလာမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ LG!
April 6, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on G7 ဟာ ဧပြီလအကုန်မှာထွက်ရှိလာမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ LG!
LG fan တွေအနေနဲ့ G7 (သို့) G7 ThinQ (Flagship နာမည်အတိအကျမထွက်သေး ?) ကို MWC 2018 မှာမျှော်မှန်းခဲ့ကြပေမယ့် ထင်ထားသလိုတော့မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ MWC မှာလွဲခဲ့တဲ့ G7 ကို LG ဟာ လာမယ့် ဧပြီလကုန်မှာမိတ်ဆက်သွားပြီး မတ်လလယ် (၇ ရက် ၈ ရက်ကျော်လောက်) မှာ ရောင်းချသွားမယ့်အကြောင်းကို ကိုရီးယားဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ အတည်ပြုလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား မှာစတင်မိတ်ဆက်သွားမှာပါ။
A rumor image of LG G7 from online community
ထူးခြားတာက G7 မှာလက်တလော Hot နေတဲ့ OLED display ကိုအသုံးပြုသွားမှာမဟုတ်ပဲ M-LCD display ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ M-LCD ဟာတော့ ပုံမှန် LCD panel တွေထက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပြီး စွမ်းအင် efficient ဖြစ်ပါတယ်။ G7 မှာအသုံးပြုမယ့် M-LCD display ဟာ OLED display နဲ့မတူပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်က မနိမ့်သွားပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်း LG electronic ကအာမခံထားပါသေးတယ်။
G7 မှာ OLED display နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တူညီတဲ့ M-LCD display အသုံးပြုထားပေမယ့် စျေးကတော့ ပိုသက်သာနေမှာပါ။ LG ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုက စျေးနှုန်းအသင့်သင့်ဖြစ်နေအောင် OLED display အစား M-LCD display ပြောင်းလဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ G7 ဟာ LG ရဲ့ ပထမဉီးဆုံး အနောက် Dual ကင်မရာ ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပြီး f.1/5 aperture ပါဝင်တာကြောင့် ပုံရိပ်တွေကပိုမိုတောက်ပနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ Notch လေးပါဝင်မှာဖြစ်သလို Snapdragon 845 processor အသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ RAM 6GB, Storage 64GB (သို့) 128GB နဲ့ရောက်ရှိလာမှာပါ။
LG ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက အနည်းငယ်အဆင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ ပြောရရင် အခြေအနေသိပ်မကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့။ G3 ကိုမိတ်ဆက်တုန်းကတော့ အခြေအနေကမဆိုးခဲ့ပါဘူး။ G4 ကတော့ လုံးဝ Fail ခဲ့ပြီး G5 ကတော့ထင်ထားသလောက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့မနေ့ကမိတ်ဆက်ထားတဲ့ G6 ဟာ မိုက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အသိအမှတ်အရမ်းကြီးအပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။ ရလဒ်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင် LG ဟာ G series ဘက်မှာ အားနည်းနေတဲ့အခြေအနေလို့ဆိုရမှာပါ။ အခု ဧပြီလအကုန်မှာမိတ်ဆက်သွားမယ့် G7 ကရော ဘယ်လိုရလဒ်တွေရရှိဉီးမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Source (In Korean), Via
Facebook မှာ third party app တွေကို ရွေးပြီး delete လုပ်နည်း